Izixhobo Zokukhetha - iSuzhou Bricmaker Automation Co., Ltd.
Izinga lokuthembeka: Imishini ingaba ukuqina ngesikhathi, noma esikhathini esithile, hhayi amathuba okuba nezinkinga.
Okubalulekile: Izinto zokwakhiwa kwegearbox usebenzisa i-20 Cr-Mn alloy, okokusebenza kuthuthukisa ukumelana kokugqoka komkhiqizo, futhi kuqinisekisa ukuqina.
Ukunemba: UKWAKHA imishini → ukucwenga okushisayo → ukusebenza kwensimbi → I-Carburizing → igiya lokugaya, kuthuthukisa kakhulu impilo yezikhathi ezi-5-10.
Amandla: Uma ubheka umthelela wokusebenza kwemishini yefektri yezitini, ngakho-ke ukwanda kusuka ekuvikeleni komklamo wesikhathi esingu-1-2.
Isakhiwo: Ekuklanyweni kwesakhiwo, njenge-extruders extrusion axial force edluliswa ngamabombo we-roller roller, bese isakazeka kuyunithi lesisekelo, okwenza umshini wokuphotha we-extrusion ngaphandle kwamandla we-axial, kuphela amandla we-radial.
Izinto ezilula: Njengamakhamera wokudubula aseJapan, wonke umuntu angayisebenzisa.
Ukusebenza kwezindleko: Ukucabangela okuphelele okusebenzisa ugesi, ukuthi ungabeka kanjani imali kusisekelo esifanayo, kukhulisa ukwanda komkhiqizo ngenkathi kunciphisa amandla nezinye izindleko zokukhiqiza.
Intuthuko: Uhlelo lweRobot luthembekile, luyaguquguquka futhi lulula.
Uhlelo lokushisa, uhlelo lokwehlisa kanye nohlelo olubomvu lokupakisha izitini, ukunciphisa imisebenzi.
Isevisi: Imishini yokuzikhethela kufanele icabangele amandla abahlinzeki ngemuva kwensizakalo nesevisi yesevisi, eqinile ngemuva kohlelo lokuthengisa olusekela imishini ethembekile.
► izimpendulo ezifika ngesikhathi ► amasevisi obuchwepheshe ► irediyasi yesevisi ► isevisi yokumisa okukodwa
Umqondo wesevisi: ukunciphisa izinkinga zabo, izinto ezincane ezingenalutho, bezenzela izinsizakalo zabo, ngaleyo ndlela banciphise isikhathi, basondele, banciphise izindleko, futhi banciphise izindleko, bathuthukise umkhiqizo womsebenzisi, nezinsizakalo zomkhiqizo.
Inqubo ekhethiwe: Inqubo efanelekile yokukhetha okokusebenza okulungile, alukho uhlobo lwendawo yonke olulungele zonke izinqubo.
Izinto ezihlukile Izitini eziluhlaza ezihlukile Indlela yokufaka isitaki ehlukile
I-screw pitch ehlukile Ijubane elijikelezayo elihlukile Amandla wamandla kagesi ahlukile Umthamo ohlukile
Khetha isitshalo esihlukile sokwenza izitini